तपाइँ पहिले! - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2018-03 > तपाईं पहिले!
तपाईं आत्म-अस्वीकार प्रेम गर्नुहुन्छ? के तपाईं सजिलो महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईं एक शिकार भूमिकामा बस्नु पर्छ? यदि तपाई साँच्चिकै रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ भने जीवन धेरै उत्तम छ। म प्रायः टेलिभिजनमा ती व्यक्तिहरूको बारेमा रोचक कथाहरू हेर्दछु जसले आफैंलाई त्याग गर्छन् वा आफैलाई अरूहरूको लागि उपलब्ध गराउँदछन्। यो सजिलैसँग अवलोकन गर्न सकिन्छ र मेरो आफ्नै कोठाको सुरक्षा र आरामबाट अनुभव गर्न सकिन्छ।
यसबारे येशूले के भन्नुपर्छ?
येशूले सबै मानिसहरु र उहाँका चेलाहरु लाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो: "यदि कोहि मेरो चेला बन्न चाहान्छ, उसले आफैंलाई इन्कार गर्नु पर्छ, उसको क्रूस उठाओ र मलाई पछ्याओ" (मार्क 8,34, नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
येशूले आफ्ना चेलाहरुलाई व्याख्या गर्न थाल्नुहुन्छ कि उनी धेरै दुखी हुनेछन्, कि उनीहरुलाई अस्वीकार गरी मारिनु पर्छ। पत्रुस येशूको कुरामा दुखी हुन्छ र येशूले उसलाई हप्काउनुहुन्छ, यसो भन्दैमा कि पत्रुसले भगवानको कुरालाई ध्यान दिदैनन्, तर मानिसहरुको कुरालाई। यस सन्दर्भमा, ख्रीष्ट बताउनुहुन्छ कि आत्म-अस्वीकार एक "भगवान को कुरा" र एक ईसाई सद्गुण हो (मार्क 8,31: 33)।
येशू के भन्नुहुन्छ? के इसाईहरूले रमाईलो गर्नु हुँदैन? होइन, त्यो सोचेन। आफूलाई इन्कार गर्नुको मतलब के हो? जीवन केवल तपाईको र तपाईले चाहानु भएको कुराको बारेमा होईन, तर अरु व्यक्तिको चाहनालाई उनीहरूको अगाडि राख्ने बारेमा। तपाईंको बच्चाहरू पहिले, तपाईंको पति पहिलो, तपाईंको पत्नी पहिलो, तपाईंको आमा बुबा पहिलो, तपाईंको छिमेकी पहिले, पहिला तपाईंको शत्रु, आदि।
क्रुसलाई स्वीकार गर्नु र आफूलाई नकार्नु १ कोरिन्थी १ 1 को महान प्रेम आज्ञामा झल्किन्छ। यो के हुन सक्छ? आफूलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति धैर्यवान र दयालु हुन्छ; उनी वा उनी कहिल्यै डाही र घमण्डी हुँदैनन्, कहिले घमण्डले फुलेका छैनन्। यो व्यक्ति रूखो छैन र उनीहरूको आफ्नै अधिकार वा तरिकामा जिद्दी गर्दैन किनकि ख्रीष्टका अनुयायीहरू स्वार्थी छैनन्। ऊ वा उनी दु: खी छैन र भोगेको अन्यायमा ध्यान दिदैन। जब तपाईं आफैंलाई इन्कार गर्नुहुन्छ, तपाईं अन्यायको बारेमा खुसी हुनुहुन्न, तर जब कानून र सत्य हुन्छ। उनी वा तिनी, जसको जीवन कहानी आत्म-अस्वीकार समावेश गर्दछ, जुनसुकै पनि चीज प्राप्त गर्न तयार हुन्छ, जे हुन्छ, सबैको उत्तम विश्वास गर्न पनि इच्छुक हुन्छ, सबै परिस्थितिमा आशा गर्छ, र सबै चीज सहन्छ। यस्तो व्यक्तिमा येशूको प्रेम कहिल्यै विफल हुँदैन।